“Waxaad qarsato waa ku qarsadaan” Dr. Dhagawayne, agaasimaha PAC oo baaq u diray dadka la nool HIV-AIDS. – Radio Daljir
“Waxaad qarsato waa ku qarsadaan” Dr. Dhagawayne, agaasimaha PAC oo baaq u diray dadka la nool HIV-AIDS.
Seteembar 19, 2011 12:00 b 0
Garoowe, Sep 19 – Agaasimaha Hay’adda Puntland u qaabilsan cudurka HIV-AIDS ee PAC ayaa maanta baaq u diray dadka ku nool Puntland ee la nool cudurka HIV-AIDS-ka, kuna boriyay in ay iska diiwan-galiyaan xarunta.
DR. Cabdiraxmaan Siciid Maxamuud ‘Dhagaweyne’ ayaa isaga oo ka hadlayay shir ay iska kaashadeen PAC iyo santuukha Qaramada Midoobay u qabilsan taranka dadka ee UNFPA, kana dhacay xarunta hay’addiisa ayaa ugu baaqay dadka la nool cudurka HIV-AIDS in ayan ka baqin in loo gaysto wax takoor ah haddii ay qaadaan tallaabada is diiwaan-galinta. Dr. Dhagawayne ayaa isaga oo khatarta qarsahada xanuunka tilmaamaya waxa uu si kooban u yiri “wixii aad qarsato waa ay ku qarsadaan.”
Shirka maanta ka dhacay xarunta PAC ayaa waxa looga hadlayay xiriirka ka dhexeeya xubnaha taranka iyo cudurka HIV-AIDS, waxana si wada-jir ah warbixino uga bixiyay saraakiil ka kala socda labada hay’adood ee PAC iyo UNFPA. Dr. Dhagawayne ayaa sheegay in uu shirkani yahay kii ugu horeeyay noociisa, waxase uu sheegay in horay loo soo qabtay shirar iyo dhaq-dhaqaaqyo badan uu ku wajahan dhinaca baraarujinta iyo wacyi-galinta. Shirkan ayaa lagu wadaa in uu socdo laba maalmood sida uu sheegay agaasimuhu.
Inta badan dadka la nool cudurka HIV-AIDS-ka ee ku nool Puntland ayaa qarsada xanuunkan, sababtoo ah cabsi ay ka qabaan in lagu takooro, taasoo markeedana culays wayn ku ah qofka cududrka qaba iyo sidoo kale hay’adaha ka shaqeeya tirakoobka iyo xannaanada dadkaas la nool xanuunka.
Si kastaba ha ahaatee waxa jira dhaq-dhaqaaqyo badan oo ay hadda hogaamiyaan dad la nool cudurka kuwaasoo u duuban in ay xannaano gaarsiiyaan dadka la nool cudurka, iyaga oo aan khusuusiyaadkooda bannaanka loo soo saarin. Dhaq-dhaqaayayasha ayaa qaba in haddii la ogaado cudurka xilli hore, isla markaana uu qofku helo xannaano buuxda uu muddo dheer la noolaan karo cudurka isaga oo ah qof caadi ah oo ka mid ah bulshada, sida cudurada kale ee la yaqaan.
Maxamed C/laahi Cali ?Kooshin?
Daljir, Garoowe. http://daljir.com/
Baahin: Salaasa, Sept 20, Weriye Xasan C. Kuuriya ~ Daljir ~ Bossaso. Gacan-ku-dhiigle hore u dilay Garsoore ka tirsanaan maxkamada darajada 1-aad ee Bossaso oo la qisaasay; Wasaarada gaashaandhigga ee dawlada federaalka ah oo sheegay in ay Al-shabaab weli ku sugan yihiin Muqdisho; Maxkamada sare ee dawlada federaalka ah oo ruqsad u siisay shirkada SKA maamulka madaarka Adam Cadde, Muqdisho.